/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ရုရှားမှ ေဂျာ်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်ြခင်း (၁၃-၈-၂၀၀၈)
ရုရှားမှ ေဂျာ်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုရပ်တန့်ြခင်း (၁၃-၈-၂၀၀၈)
Labels: သတင်းများ, သိသမျှ, အြမင်များ
ရုရှားသမ္မတ Mr. Dmitry Medvedev က ေဂျာ်ဂျီယာသို့ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုးသတ်ရန် အမိန့်ေပးေြကာင်း Kremlin မှ ေြကြငာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ေြကြငာချက်သည် ြပင်သစ်သမ္မတ Nicolas Sarkozy က ရုရှားသမ္မတနှင့်ေတွ့၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးအလားအလာအတွက် ေစ့စပ်ေဆွးေနွးရန် ေမာ်စကိုသို့ မေရာက်မီ မိနစ်ပိုင်းေစာ၍ ေပါ်ထွက်လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ြပင်သစ်သမ္မတက ရုရှားသမ္မတ၏ ေြကြငာချက်သည် မိမိတို့ေမှျာ်လင့်ေနသည့် ေြကြငာချက်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ထိုသို့ ေြကြငာမှုသည် မိမိတို့အတွက် သတင်းေကာင်းပင် ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ ရုရှားသမ္မတ၏ ေြကြငာချက်သည် ေဂျာ်ဂျီယာ၏ သီးြခားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ေတာင် Ossetia ေဒသတွင် ေဂျာ်ဂျီယာ တပ်မှ ၀င်ေရာက်တိုက်ခိုက်မှု စတင်သည့်ေန့မှစ၍ (၅)ရက်အြကာတွင် ေပါ်ထွက်လာြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ထိုသို့ မေြကြငာမီ ပင်လယ်နက်ဆိပ်ကမ်းြမို့ Poti သို့ ေပးပို့သည့် ေရနံပိုက်လိုင်း(၃)ခုအနက် တစ်ခုမှာ ရုရှားတို့၏ဗံုး ထိမှန်ခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဗံုးထိမှန်ချိန်၌ ပိုက်လိုင်းတွင် ေရနံများ မရိှဟု ေဂျာ်ဂျီယာ ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီးဌာနမှ အရာရိှတစ်ဦးက ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ေတာင် Ossetia တွင် ြငိမ်းချမ်းေရးထိန်းသိမ်းေရးတပ်များနှင့် ြပည်သူများအတွက် လံုြခံုေရးကို ြပန်လည် ရယူြပီးေနာက် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုးသတ်ရန် ဆံုးြဖတ်ခဲ့ပါသည်ဟု အရာရိှများကို သမ္မတက ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ရုရှားအေနြဖင့် ေဂျာ်ဂျီင်္ယာ၏ ေခါင်းေဆာင်မှုအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ြကီးစွာစိုးရိမ်လျက်ရိှြပီး မြကာမီအချိန်အတွင်း နှစ်ဘက်ေဆွးေနွးနိုင်မည့် လက္ခဏာများ မရိှေသးေြကာင်း ေတွ့ရပါသည်။ အေစာပိုင်းတွင် ရုရှားကုလသမဂ္ဂ သံအမတ်ြကီး Mr.Vitaly Churbinက ြပင်သစ်မှ မူြကမ်းြပုစုသည့် လံုြခံုေရးေကာင်စီ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး ဆံုးြဖတ်ချက်ကို လက်မှတ်ေရးထိုး နိုင်ြခင်း မရိှဟုေြပာပါသည်။ အေြကာင်းမှာ ၎င်းဆံုးြဖတ်ချက်သည် ဟာကွက်များ ရိှေနသည့် အတွက်ေြကာင့် ြဖစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ Mr.Mikheil Saakashvili သည် ဖင်လန်နှင့် ြပင်သစ်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးများနှင့် ေတွ့ဆံုြပီးေနာက် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး အဆိုြပုချက်များကို လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့ပါသည်။
ရုရှားသမ္မတက စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကို အဆံုးသတ်ရန် မေြကြငာမီ ေဂျာ်ဂျီယာ၏ Gori ြမို့ကို ရုရှားစစ်ေလယာဉ်များက ဗံုးြကဲခဲ့ေြကာင်း ေနာက်ဆံုးသတင်းများအရ သိရပါသည်။ အေစာပိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ရုရှားနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Mr.Sergey Lavrov က ရုရှားအေနြဖင့် ေဂျာ်ဂျီယာ နယ်နမိတ်ထဲတွင် စစ်မဲ့ဇံု ဖန်တီးရန် အလိုရိှေြကာင်း၊ အပစ်အခတ်မရပ်စဲမီ ေြကြငာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ဇံုမှာ သီးြခားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ြပည်နယ်ကို ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်က ထပ်မံတိုက်ခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ေကာင်းစွာလံုေလာက်ေသာ အေနအထားတွင် ရိှရမည်ဟု ရုရှားနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးက ဆိုပါသည်။
BBC သို့ မျက်ြမင်သက်ေသများ၏ ေြပာြကားချက်အရ ေတာင် Ossetia ြမို့ေတာ် Tskhinvali မှ ၁၀မိုင် (၁၅ ကီလိုမီတာ) ေ၀းသည့် ြမို့ထဲရိှ ေဆးရံုကို ဗံုးမှန်ခဲ့ရာ လူအများအြပား ေသဆံုးသွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။ Reuters သတင်းေအဂျင်စီ သတင်းေထာက်က ေြပာြကားရာ၌ ၎င်း၏ ေမာ်ေတာ်ယာဉ်ေရှ့တွင် ဗံုးများ ေပါက်ကွဲခဲ့ေြကာင်းနှင့် Reuters သတင်းအင်ဂျင်စီ ဓါတ်ပံုဆရာက လမ်းများတွင် ေသေြကဒဏ်ရာရေနသည့် လူများကို ြမင်ေတွ့ခဲ့ရေြကာင်း ေြပာပါသည်။ ရုရှားနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက ေြပာြကားရာ၌ ရုရှားတပ်များသည် သီးြခားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ နယ်ေြမြဖစ်သည့် Abkhazia မှ ဆက်လက်ချီတက်ခဲ့ရာ ေဂျာ်ဂျီယာ အေနာက်ပိုင်းရိှ Senaki ြမို့သို့ ေရာက်ရိှခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာ လံုြခံုေရးအြကီးအကဲ Alexandar Lomaia က ြပီးခဲ့ေသာ အဂင်္ါေန့တွင် ရုရှားတပ်များသည် Senaki ြမို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ြပီး Gori ြမို့တစ်၀ိုက်နှင့် Zugdidi ြမို့အြပင်ဘက်တွင် ကျန်ရိှေနေသးသည်ကို ေြပာြကားေြကာင်း The Associated Press သတင်းဌာနက သတင်းပို့ပါသည်။
Reported clashes (သတင်းေပးပို့သည့် တိုက်ပွဲေနရာများ)၊ Russian warships (ရုရှားစစ်သေဘင်္ာများ)၊ Military base (စစ်တပ်အေြခစိုက်စခန်း)၊ Airbase (ေလတပ်အေြခစိုက်စခန်း)၊ Disputed territories (အြငင်းပွားသည့်နယ်ေြမများ)၊ Baku- Tbilisi-Ceyhan pipeline (ေရနံပိုက်လိုင်း)
ေဂျာ်ဂျီယာ လံုြခံုေရးအြကီးအကဲက အဂင်္ါေန့နံနက်တွင် Gori ြမို့သို့ ရုရှားေလယာဉ်မှ အုပ်ချုပ်ေရး အေဆာက်အအံုများနှင့် ြမို့လယ်ေခါင်ရိှ လမ်းေဘးေဈးတစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထား၍ ဗံုးြကဲ ခဲ့ေြကာင်း ေြပာြကားသည်ကို AP သတင်းဌာနက ဆက်လက်သတင်းပို့ပါသည်။
အေမရိကန်၏မဟာမိတ်ြဖစ်ြပီး အေနာက်နိုင်ငံများကိုလိုလားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာသည် ရုရှားမှ ေတာင့်တင်းစွာ ေကျာေထာက်ေနာက်ခံြပုထားေသာ ခွဲထွက်ေရးသမားများ လှုပ်ရှားေနသည့် ေတာင် Ossetia နှင့် Abkhazia တို့တွင် ၎င်း၏ဩဇာလွှမ်းမိုးေရးအတွက် ရည်ရွယ်ြကိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ ခွဲထွက်ေရး သမားများ၏ အေြမာက်ြဖင့် ပစ်ခတ်မှုေြကာင့် ြပည်သူ(၁၀)ဦး ေသဆံုးခဲ့ြပီးေနာက် လွန်ခဲ့ေသာ ြကာသာပေတးေန့ညက ေဂျာ်ဂျီယာက စစ်ဆင်ေရးြပုလုပ်ခဲ့မှုမှ စတင်၍ ေတာင် Ossetia ၏ အေြခအေနမှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာက ရုရှားအား ခွဲထွက်ေရးသမားများကို ေထာက်ခံအားေပးသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့ပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာ၏ သီးြခားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ေရးေဒသ Abkhazia တွင် ခွဲထွက်ေရးသူပုန်များက ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များကို Kodori Gorge ေဒသတွင် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်လျက်ရိှပါသည်။ အဆိုပါေဒသမှာ Abkhazia ၏ တစ်ခုတည်းေသာ ေဂျာ်ဂျီယာတပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုေအာက်တွင် ရိှသည့်နယ်ေြမ ြဖစ်ပါသည်။
သတင်းထုတ်ြပန်ချက်အရ ရုရှားသမ္မတ Mr.Medvedev က ၎င်း၏ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးနှင့် ကာကွယ်ေရးဦးစီးချုပ်အား မိမိတို့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရရိှြပီးြဖစ်ေြကာင်း ၊ ေဂျာ်ဂျီယာ အာဏာပိုင် များအား အင်အားြဖင့် ြငိမ်းချမ်းေရးြပုလုပ်ရန် စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအေပါ် အဆံုးသတ်ရန် မိမိ ဆံုးြဖတ်ခဲ့ေြကာင်း၊ မိမိတို့၏ ြငိမ်းချမ်းေရး ထိန်းသိမ်းေရးတပ်များနှင့် ြပည်သူများ၏ လံုြခံုေရးကို ြပန်လည်ရယူခဲ့ြပီ ြဖစ်ေြကာင်း၊ ကျူးေကျာ်သူများကို အြပစ်ေပးြပီးြဖစ်ေြကာင်း ၊ ၎င်းတို့အေနြဖင့် ြကီးစွာေသာ ဆံုးရံှုးမှုများကို ြကံုေတွ့ရရိှခဲ့ြကေြကာင်းနှင့် ၎င်းတို့၏တပ်များသည်လည်း ဖရုိဖရဲြဖင့် ြပိုကွဲသွားြပီြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ေမာ်စကိုရိှ BBC သတင်းေထာက် James Rodgers က ေြပာြကားရာ၌ ေဂျာ်ဂျီယာတို့၏ြမို့ေတာ် Tbilisi ရိှ အစိုးရနှင့် ေဆွးေနွးရန် ရုရှားတို့အေနြဖင့် လိုလားသည့် လက္ခဏာ မြပေသးေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Mr.Sergei Lavrov ကေဂျာ်ဂျီယာတို့အေနြဖင့် အင်အားအသံုးမြပု ေြကာင်း ၊ တရားဥပေဒနှင့်အညီ တုပ်ေနှာင်ထားသည့် စာချုပ် စာတမ်းများတွင် မြဖစ်မေန လက်မှတ်ေရးထိုးရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်။ Mr Lavrov က ေတာင် Ossetia ကို ေဂျာ်ဂျီယာတို့က တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအေပါ် အေနာက်နိုင်ငံများက မည်သို့မှျ ေ၀ဖန်ေြပာြကားြခင်း မြပုသည့်အတွက် မိမိအေနြဖင့် အြကီးအကျယ် စိတ်ပျက်မိေြကာင်း ြပင်းထန်စွာ ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ရုရှားသမ္မတက သတိေပးေြပာြကားရာ၌ ေတာင် Ossetia တွင် ေဂျာ်ဂျီယာတို့အေနြဖင့် စစ်ေရး လှုပ်ရှားမှုများကို ထပ်မံ ြပုလုပ်ပါက သည်းခံမည်မဟုတ်ေြကာင်း၊ ခုခံမှု သို့မဟုတ် အြခားကျူးေကျာ် တိုက်ခိုက်မှုများ ြပန်လည်ြကိုးပမ်းလာပါက နှိမ်နင်းသွားမည်ြဖစ်ေြကာင်းြဖင့် ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
Gori ြမို့အနီးရိှ BBC သတင်းေထာက် Ms.Gabiel Gatehouse က ရုရှားသမ္မတ၏ ေြကြငာချက် မတိုင်မီ ြမို့ပတ်ပတ်လည်ကို အေြမာက်များြဖင့် ြပတ်ေတာင်းြပတ်ေတာင်း ပစ်ခတ်သည်ကို ြမင်ေတွ့ခဲ့ရေြကာင်း သတင်းပို့ပါသည်။ နယ်သာလန်အစိုးရ အရာရိှက Gori ြမို့တွင် ေသဆံုးသူများ အနက် မိမိတို့၏ ဒတ်ချ်လူမျိုး တီဗီွကင်မရာဆရာတစ်ဦး ပါ၀င်ြပီး ဂျာနယ်သတင်းဆရာတစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရိှေြကာင်း အတည်ြပု ေြပာြကားပါသည်။ Gori ြမို့သည် ေဂျာ်ဂျီယာ၏ အဓိက အေရှ့နှင့် အေနာက် အေ၀းေြပးလမ်းမြကီးတစ်ေလှျာက်တွင် တည်ရိှြပီး ဆက်သွယ်ေရးစနစ်များအတွက် အေရးပါေသာေနရာ ြဖစ်ပါသည်။
BBC သတင်းေထာက်က Gori ြမို့၏ေတာင်ဘက်တွင် ရုရှားတပ်များ၏ အရိပ်အေရာင်ကို မြမင် မေတွ့ရေသာ်လည်း ြမို့၏အြပင်ဘက် လမ်းမေပါ်တွင် စွန့်ပစ်ထားသည့် သို့မဟုတ် မီးေလာင်ထားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်၏ ကားအေြမာက်အများကို ေတွ့ခဲ့ရေြကာင်း သတင်းရရိှပါသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Wednesday, August 13, 2008
ေကျးဇူး ကိုလင်းဦး. သတင်းေတွ အတွက်.
ကျွန်ေတာ့် အြမင်ေြပာရရင်ေတာ့ ရုရှားက ေဂျာ်ဂျီယာ ကို ခပ်ေထာင်ေထာင် မလုပ်နဲ့ ဦးကျိုးသွားမယ် ဆိုြပီး ြကိုြပီး နှိပ်ကွပ်လိုက်တဲ့ သေဘာလို့ ထင်ပါတယ်။
ြပီးခဲ့တဲ့ ကာလ အတွင်းကပဲ ေဂျာ်ဂျီယာကလည်း US ရဲ့ ဒံုးပျံကာကွယ်ေရး စနစ်ကို သူ့နိုင်ငံတွင်း တည်ေဆာက်ခွင့်ြပုဖို့ ေဆွးေနွးခဲ့ြကတယ် ဆိုေတာ့ ရုရှားြကီး နားရွက်တံေထွးဆွတ်ခံထိြဖစ်ြပီး အကွက်ေပါ်တာနဲ့ တွယ်ထုတ်လိုက် တယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။
ဘာပဲြဖစ်ြဖစ်. အားလံုး ြငိမ်းြငိမ်းချမ်းချမ်း ရှိြကရင် အေကာင်းဆံုးပါပဲဗျာ.
August 16, 2008 at 10:40:00 PM GMT+6:30